Halatra 800 tapitrisa Ar an’ny P.M : olona enina voasambotra, naiditra am-ponja avokoa | NewsMada
Halatra 800 tapitrisa Ar an’ny P.M : olona enina voasambotra, naiditra am-ponja avokoa
Voasambotry ny zandary tany Manambolosy Mananara Avaratra, sy tany Antalaha ary teto Antananarivo ny olona enina voarohirohy amin’ny fangalarana ny volabe 800 tapitrisa Ar, izay voalaza fa an’ny praiminisitra. Ny mpiambina ny praiminisitra sy ny vadin’ilay mpiambina ihany no voalazan’ny zandary fa nangalatra ireo vola ireo. Rehefa nandeha ny famotorana, nanondro olona efatra ireo ary voasambotra ihany koa ireo.
“Ny faramparan’ny taona 2017 ny nahavery io vola io, ary voalaza fa “fond spéciaux” io vola io ka izay ny nitazonana azy io tany an-tranon’ny praiminisitra. Nisy ny fitoriana nipetraka tany amin’ny zandary mikasika ny fahaverezan’ny vola”, hoy ny zandary. Ity resa-bola an-jatony tapitrisany ity anefa, vao volana vitsy monja no nivoaka ny resaka momba izany, na tamin’ny tambajotra sosialy izany, na tamin’ny haino aman-jery. Izany hoe nafenina tany ny raharaha, saingy nipoitra tampoka ihany.
Raha ny fanazavana ihany, vola fampiasan’ny lehiben’ny andrimpanjakana rehetra hanatanterahany ny filany amin’ny asany sy ny andraikiny, ny fahamehana sy filàna maika ihany koa izy io. Tokony ho nampiasain’ny praiminisitra ao anatin’ny volana maromaro izy io.
Natolotra ny fampanoavana izy enina ireo ary naiditra am-ponja vonjimaika eny Tsiafahy ny roa ary eny Antanimora ny ambiny.
Nisy fandavana ny fisian’ny vola…
Efa nisy fotoana nanda ny fisian’io volabe io tao an-tranony ny praiminisitra raha vao nivoaka io vaovao io. Samy gaga mantsy ny rehetra hoe amin’ny fomba ahoana ny hitazonana volabe anjatony tapitrisa ao an-trano, ary ny fangalarana izany koa. Voaporofo anefa izao fa tena nisy ny volabe ary tao an-tranon’ny praiminisitra mihitsy. Naninona no nanda ny fisian’ny vola be ny praiminisitra tany am-boalohany? Izao anefa, voaporofo fa nisy ihany? “Fonds spéciaux” ny fanazavana azy fa hafahafa ihany raha ny tena marina!